အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: ပြည်တွင်းမှ ရတနာများ
အထက်က စာသားလေးကတော့ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုက အဖြေ စကားလေးပါပဲ ၊၊ ပြည်တွင်းမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအတွက် အင်မတန်မှာ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ၊၊ ဘာလို့လဲ ဆိုိတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ပြင်ပ တစ်နေရာမှာ လက်ရှိရောက်ရှိနေပေမယ့် ဟိုးအရင်တုန်း ကတော့ ပြည်တွင်းမှာ လုပ်ကိုင် ရုန်းကန်ခဲ့ဖူးပါတယ် ၊၊ အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစတစ် ခုကြောင့် ပြည်ပမှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေရပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမြဲတမ်း စိတ်မလုံ ဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပါပဲ ၊၊ လိပ်ပြာမလုံ ခံစားမိတာတော့ အချိန်တိုင်းပါပဲ ၊၊
အမှန်တကယ် တိုင်းပြည်တွင်းမှာ နေပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ အလုပ်လုပ်ပေးနေသူ တွေ ဒုနဲ့ ဒေးပါ ၊၊ လူတွေကလည်း ခက်ပါတယ် ၊၊ တခါတလေ ပြည်ပ ထွက် အလုပ်လုပ်နေသူတွေကပဲ ပိုတော် ပိုတက် သယောင်ယောင် ၊ ပြည်တွင်းမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတွေကပဲ လူပျင်းတွေလိုလို လူဖျင်းတွေလိုလို အကြည့် မျိုးနဲ့ ပြောတက်တာလည်း ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ဖူးပါတယ် ၊၊၊ ကိုယ်တိုင်လည်း အားမလို အားမရ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ၊၊ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ တကယ်တော်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်း အမြဲတမ်း အားကျ ဂုဏ်ယူမိသလို သူတို့ကိုလည်း လေးစားမိပါတယ် ၊၊ ဘယ်လို သာမာန်လူပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေထိုင်ရှင်သန် ရပ်တည်လို့ အခြေခံလစာ လောက်တော့ လူတိုင်း ရှာနိုင်တဲ့ ပြည်ပမှာ အဆင်ပြေတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ဂုဏ်ယူစ၇ာ မရှိတာတော့ အမှန်ပါပဲ ၊၊
ဒါ့ကြောင့် ပြင်ပတစ်နေရာမှာ ရှိနေသမျှကာလလေးမှာ ရသမျှ ပညာ ၊ ဥစာလေး တွေစုဆောင်းပြီး မဝေးတော့ တဲ့ အနာဂတ်မှာ သာယာလှပနေတော့မယ့် အမိမြန်မာပြည် ပြန်စို့ ရယ်လား ....
... 1:42:00 PM
တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စဉ်းစားမိတယ်. ရတနာတော့ မဟုတ်တာ သေချာတယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျချိန်တွေမှာ ဒီပို့စ်လေး ဖတ်လိုက်ရင် ပြန်ပြီး အားတက်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ.
3 October 2011 at 2:44 PM
၀ါသနာ ဗီဇ နဲ့ အားထုတ်မှု